June 2020 – KHAATUMO NEWS
Deg Deg:Deni Oo Qaadacay Shirkii Madaxweyne Farmaajo Ku Dhawaaqay
Madaxweynaha Puntland wuxuu sheegay in uu aqbalayo qaraarkii baarlamaanka Puntland oo u diidayay in uusan ka qeybgali karin shirka magaalada Muqdisho. Shirkaas waxaa Madaxda maamul gobaleedyada ku casumay Madaxweynaha Soomaaliya. Madaxweyne Deni ayaa eed u soo jeediyey Madaxweynaha F. Soomaaliya, isagoo sheegay in uu doonayo mudo kororsi, isagoo u mahadceliyayContinue Reading
Deg Deg:Muuse Biixi Oo Markii ugu Horeysay Albaabka Ka Furay Cali khaliif Galaydh
Muuse Biixi Cabdi ayaa Qaabilay Prof. Cali Khaliif Galaydh, Madaxweynihii hore Khaatumo oo mud sadex sano ah ku sugna Hargaysa. Kulankan oo noqonaya kii koowaad ee ay yeeshaan Muuse Biixi Cabdi inta loo doortay Madaxweynaha Somaliland iyo Prof. Cali Khaliif Galaydh, ayaa lagaga wada-hadlay Arrimo kala duwan, sida ay ilo-wareedyoContinue Reading
Deg Deg Daawo:Barlamaanka Somaliland Oo Kalsoonidii Kala Laabtay Faysal Cali waraabe,
Baarlamaanka Somaliland ayaa ku dhowaaqay inay Inay kalsoonidii kala Noqdeen Gudoomiyaha Xisbiga Ucid Faysal Cali Waraabe. Waxayna ku eedeeyeen Kicin dad wayne iyo Hadalo uu dhowaan ku Weeraray Gudoomiyaha Baarlmaaanka Baashe Maxamed Faarax iyo Siyaasiyiinta kasoo jeeda gobolada Sool iyo Sanaag. Golaha Wakiilada Somaliland ayaa xeer ilaalinta ugu baaqay inContinue Reading
Deg Deg Daawo:Mudaharaad Ka Socda caasimada Itoobiya,
Ethopia : Banaan baxayaal ka gadoodsan dilka heesaagii caanka ka ahaa dalkaasi ee Hacaalluu Hundeessaa , oo maanta rabshado khasaare gaystay ka dhigay Caasimadda Addis ee dalka Ethopia . Heesaaga geeriyooday oo kasoo jeedey qoomiyadda Oromada ayaa kamid ahaa dadka loo tiriyo isabadalka dalkaasi ka dhacay ee suuro gal kaContinue Reading
Deg Deg Daawo:Taliyaha Ciidanka SSC oo Ka hadlay Arrimo Khatar Ah,
Beesha Hawiye Gaar Ahaan Masiliyiinta Hirshabeellle ayaa si kulul ugu jawaabay maamulka Puntland iyo diidmada uu ka keenay Xubnaha 13 Ah ee Maamulka Dadban ee Banaadir loo meel mariyay, Masuuliyiintan Beesha Hawiye oo ka hadlaaya Arrinkan ayaa yidhi“Puntlnd Fadaraalka iyada noo keentay waanu ka aqbalnay Gobol wax ha lagu qeybsadoContinue Reading
Puntland Oo Tooshka Ku Ifisay Wadadii Iyana Guusha U Ahayd Shacabka SSC -na Mudo Ku Taamayen.
Golaha wakiilada Puntland ayaa maanta soo saaray Go aamo ay uga hadlayan Sad-bursiga Beesha Hawiye iyo maamulka Dadban ee Gobolka Banaadir. Puntland ayaa sheegtay in Gobolada Sool Iyo Sanaag iyo Gobolka Banaadir ay leeyiiin xaquuq ama metelaad Siyaasadeed balse loo bahan yahay in loo maro sifo sharci ah oo aanContinue Reading
In Majeerten Ku Qamaamo Gooni Goosad Waxaa Sabab U Ah Kool-koolinta Isaaq Ee Fadaraalka
Laga soo bilaabo bishii Sadexaad ee sanadkan ilaa maanta oo aan joogto waxaa soo baxaayay warar sheegaya in maamulka Puntland uu doonaayo in uu soomaaliya ka goosto hadii la maqli waayo taladiisa. In Soomaaliya iyo Guud ahaan Dawlada Fadaraalka xiligan ay ugu Hanjabaan Puntland , inay ka goostaan Soomaaliya MaxaaContinue Reading
Deg Deg:Mooshin Loo Gudbiyay Gudoomiyaha Barlamaanka Soomaaliya,
Mooshin ay saxiixayaal ka yihiin in ka badan 70 Xildhibaan ayaa warar madax banaan sheegayaan in loo gudbiyey Gudoomiyaha baarlamaanka Federaalka. Mooshinka waxaa lagu dalbanayaa in tiradda baarlamaanka Federaalka lagu daro 30 xildhibaan oo la siinayo Beesha 5aad, taas oo horey u lahayd 31 Xildhibaan. Qoondada hadda ee 4.5 ayaaContinue Reading
Beesha Daarood dalka miyeey ka guureen? mise SNM iyo USC ayaa hadda ogaaday inay ku adkaadeen dagaalkii sokeeye ee Soomaaliya.
Maanta gudaha Soomaaliya saddex doodood ayaa ka socota , oo aad loo hadal hayaa. Doodda kowaad, waxa wata beesha Isaaq oo ah in Waqooyiga Soomaaliya iyaga wax laga waydiiyo ayna ma’suul ka yihiin beelaha Hart ee dega Waqooyiga Soomaaliya. Dooddan waa lagu kala baxay, waxaana ku guulaystay beesha Isaaq shirkiiContinue Reading